Ilaalinta Sharciga Qaanuunka iyo Qarsoodiga Aasiya | Xalka OMG
Ilaalinta Sharciga Qaanuunka iyo Qarsoodiga Aasiya
Dhibaatada ugu weyn ee waaxyaha booliis ee adeegsada kaameeradda shaqsiyaadka booliiska shaqsiyadeed, ayaa ah in marka lagu jiro xaalad walaac, Wakiilka wuxuu xasuustaa duubista kaamirada. Waxay u badan tahay, walbahaarka, Wakiilku xitaa ma xasuusto inuu watay kamarado sidaa darteedna wuxuu lumiyey dhammaan caddaynta garaafka ee ku lug leh lahaanshaha fiidiyow iyo cod maqalka ah ee ficilka booliis.
Mid ka mid ah dhibaatooyinka weyn ee amniga ka jira ayaa ah kan na xukumaya iyo sida. "Tani waa teknolojiyad leh awood macquul ah oo ay ugu adeegto xakamayn iyo culeys xagga awoodda bilayska ah,"
Ma jiraan wax faragelin booliis ah oo aan jirin wax jir dil ah: Rabshadaha loo geysto saraakiisha booliisku way sii kordhayaan. Kaamirooyinka loogu yeero jirka waxaa la doonayaa inay gacan ka gaystaan ​​ayada. Kaamirooyinka, oo loo adeegsaday yunifoomka, waxay duubaan weerarada waxayna u adeegaan qaab cadaadis, iyo sidoo kale inay hubiyaan caddeynta.
Booliisku way ku dhaqaaqi karaan iyaga markasta oo ay jirto khatar rabshad oo waxay joogaan meel fagaare ah. Waxa kaliya ee ay tahay inay sameyaan waa inay ogeysiiyaan qofka ku lug leh in wax walba lagu duubi doono fiidiyaha. Inta badan wadamada Aasiya horeyba waxay u adeegsadaan kaamirooyinka jirka. Xitaa ka soo horjeedda cadaadiska ilaaliyayaasha xogta, ee arka xuquuqda aasaasiga ah ee go'aan ka gaarista xog-ogaalka. Sida laga soo xigtay booliis, saameyntu aad bay u weyneyd: weeraryahanno badan ayaa la habeeyay, dhegeysiyada maxkamadda ee ku xigta iyaguna way sahlanaayeen duubista. Isla mar ahaantaana, waa suurtagal in la hubiyo haddii booliisku laftiisu si sax ah u dhaqmeen.
Waxa ugu wanaagsan ee ku saabsan kaamirooyinka booliiska ayaa ah inay qabtaan sawirada kulamada booliiska ay la leeyihiin xubnaha bulshada, oo ay ku jiraan tuhmanayaal, markhaatiyaal, iyo dadka jidka mara. Rikoodhku wuxuu ka caawiyaa dhinacyada oo dhami inay daacad u ahaadaan una oggolaadaan inay helaan xoogaa is aaminaad ah, iyagoo og in waxkasta oo qof ka yiraahdo is dhexgalka la xaqiijin karo goor dambe.
Waxa kale oo jiri kara xoogaa nabadgelyo dadweyne xagga teknolojiyadda kale: garashada wajiga. Waad falanqayn kartaa astaamaha qofka inaad isbarbar dhig ku sameyso astaamaha keydka macluumaadka, sida laysanka gawaarida ee Waaxda Gawaarida. Dijitaalka 'dijitaalka ah ee wejiga' lagu sameeyay ee lagu sameeyay nidaamyada aqoonsiga sawirka waxaa loo adeegsan karaa in lagu caawiyo sidii looga heli lahaa dadka lumay cudurka Alzheimer, tusaale ahaan, ama tuhmanayaasha dambiile, ama qof kasta
Hadda, qaar ka mid ah hay'adaha booliiska waxay raadinayaan inay isku daraan labada teknolojiyada, iyagoo dhigaya duubis muuqaal ah oo laga duubay muuqaalka wajiga iyada oo loo marayo falanqaynta aqoonsiga wajiga.
Taasi waxay ka yeeli doontaa nin kasta oo booliis ah wax basaas ah.
Waxay xubin kasta ka yeeli laheyd meel ay ku soo aruuriso, ku keydiso oo ay ku falanqeyso xogta shaqsiyeed iyadoon fasax laga helin maadooyinka la duubay. Oo isna wuu samayn lahaa xitaa haddii maadooyinkaas aan lagu tuhunsaneyn inay falal xun sameeyeen.
Aqoonsiga wajiga, oo ay weheliso sawirrada kamaradaha jirka, ayaa si khaldan loo isticmaali karaa. Waad raadraaci kartaa halka uu qof waliba joogo waqti kasta oo aad ku keydiso xogtaas diiwaannada joogtada ah ee adeegsiga dambe. Waxaa xitaa loo isticmaali karaa dabagal joogto ah oo bulshada oo dhan ah. Waa fikrad aad u xun. Waxay carqalad ku noqonaysaa ujeeddada dhan ee kaamirooyinka jirka, taas oo ahayd in dib loo soo celiyo kalsoonidii bilayska.
Teknoolojiyadda lafteeda ayaa ah teknolojiyad keliya: qalabyo kala duwan oo kor u qaadaya awoodda aadanaha. Furayaasha faa'iidooyinka iyo qatarta waa qawaaniinta qeexaya sida awooda loo adeegsan karo. Kaamirooyinka jirka, tusaale ahaan, waxay si fudud u tirtiri karaan, intii ay kordhin lahaayeen, kalsoonida ay ku qabaan booliiska haddii saraakiishu ay marin u heli karaan sawirrada iyo haddii ay xakameyn lahaayeen isticmaalkooda. Sidaas awgeed, waaxda booliiska iyo hay'ado kale ayaa qaatay xeerar u baahan in siidaynta dadweynaha loo soo bandhigo sawirada laga soo qabtay kaamirada jirka dhowr toddobaad gudahood markii la qabtay kulanka. Sharci dejinta ayaa sameysay isla sanadkii hore iyaga oo amarey in hay'ad kasta oo sharci fulineed oo adeegsata kaamirooyinka jirka ay ka dhigaan sawirrada si isku mid ah oo ay shacabka u heli karaan. Sharci-dajiyayaashu hadda waxay ka fiirsanayaan sharci mamnuucaya adeegsiga tikniyoolajiyadda wajiga iyo sawirrada kamaradaha jirka.
Qaar ka mid ah kooxaha booliiska way diidaan sharciga sababta oo ah gobolka waa inuusan ka hor istaagin adeegsiga aalado fududaynaya dagaalka ka dhanka ah dambiyada iyo aqoonsiga ku xadgudubka sharciga.
Xaqiiqdiina waxaa jira isku-dheelitir ay bulshada u baahan tahay inay gaaraan inta u dhexeysa waxyaabaha gaarka kuu ah: ka xor-ka-noqoshada fara-gelinta dowladda ee nolosha khaaska ah iyo hubinta in aragtida sarkaal bilays ah aysan micnaheedu ahayn gelitaanka macluumaadkaaga shakhsiyeed meel kasta oo xog ah oo dijital ah. Niyad si si fudud looga mamnuuco tikniyoolajiyad cusub ama cabsi gelin waa la fahmi karaa, laakiin dhammaanteen waxaan uga faa'iidaysan lahayn hab fikir badan.
Sidoo kale, noocyada feejignaanta qaarkood ayaa laga sameeyay nolosha casriga ah wayna sii kordhayaan meelkasta. Waqtigan xaadirka ah waxaad ku bixin kartaa dhowr doollar kaamirooyinka amniga ee ku xiran internetka oo kuu sheegi kara, meel kasta oo aad joogtid, cidda ku taal albaabkaaga. Teknolojiyadda noocaas ah ma dhammaan doonto.
Sidoo kale waad la wadaagi kartaa sawirrada la soo uruuriyay waaxda booliiska ee deegaankaaga, oo aad markaa ugu adeegsan karto amnigaaga dadweynaha ama ujeedo kormeer. Tuug badan oo xirxiran oo boorsooyin ah ayaa lagu qabtay iyaga oo adeegsanaya sawirro ay wadaagaan booliiska.
Laakiin miyaa loo baahan yahay adeegsadayaasha nidaamyadaas inay la wadaagaan sawirrada booliiska? Taasi waa arrin kale oo gebi ahaanba ka duwan. Sharciyada waa in loo dejiyaa si loo hubiyo in tikniyoolajiyadda, iyo dowladda, ay u adeegto shacabka oo aan ku xirnayn.
Sharciga lagu mamnuucayo isticmaalka tikniyoolajiyadda wajiga lagu aqoonsado oo ay weheliso kaamirooyinka booliiska ayaa shacabka ku ilaaliyaya ilaalintooda. Waa kordhin dabiici ah oo biilkii sanadkii hore la sameeyo si loo hubiyo in dadweynuhu ugu dambeyntii marin u heli karaan duubista kamaradaha jirka. Waxay xaqiijineysaa in kaamirooyinka jirka ay sii wadaan howlahooda sidii loogu talagalay, si loo kordhiyo kalsoonida sharci fulinta, halkii loo wareejin lahaa awoodda tikniyoolajiyadda dadweynaha booliiska.
Mid ka mid ah dhibaatooyinka weyn ee amniga ka jira ayaa ah kan na xukumaya iyo sida. "Tani waa tikniyoolajiyad leh awood ay ku shaqeyso sidii koontarool iyo culeys dhanka awoodda booliiska ah," \_
Waxa kale oo jiri kara xoogaa nabadgelyo dadweyne xagga teknolojiyadda kale: garashada wajiga. Waad falanqayn kartaa astaamaha qofka inaad isbarbar dhig ku sameyso astaamaha keydka macluumaadka, sida laysanka gawaarida ee Waaxda Gawaarida. Dijitaalka 'faraha ee wajiga' ee lagu sameeyay nidaamyada aqoonsiga sawirka waxaa loo adeegsan karaa in lagu caawiyo sidii looga heli lahaa dadka lumay cudurka 'Alzheimer', tusaale ahaan, ama tuhmanayaasha dambiile, ama qof kasta.
Aqoonsiga wajiga, oo ay weheliso sawirrada kamaradaha jirka, ayaa si khaldan loo isticmaali karaa. Waad raadraaci kartaa halka uu qof waliba joogo waqti kasta oo aad ku keydiso xogtaas diiwaannada joogtada ah ee adeegsiga dambe. Waxaa xitaa loo isticmaali karaa dabagal joogto ah oo bulshada oo dhan ah.
Waa fikrad aad u xun. Waxay carqalad ku noqonaysaa ujeeddada dhan ee kaamirooyinka jirka, taas oo ahayd in dib loo soo celiyo kalsoonidii bilayska.
Teknoolojiyadda lafteeda ayaa ah teknolojiyad keliya: qalabyo kala duwan oo kor u qaadaya awoodda aadanaha. Furayaasha faa'iidooyinka iyo qatarta waa qawaaniinta qeexaya sida awooda loo adeegsan karo. Kaamirooyinka jirka, tusaale ahaan, waxay si fudud u tirtiri karaan, intii ay kordhin lahaayeen, kalsoonida ay ku qabaan booliiska haddii saraakiishu ay marin u heli karaan sawirrada iyo haddii ay xakameyn lahaayeen isticmaalkooda. Sidaas awgeed, waaxda booliiska iyo hay'ado kale ayaa qaatay xeerar u baahan in siidaynta dadweynaha loo soo bandhigo sawirada laga soo qabtay kaamirada jirka dhowr toddobaad gudahood markii la qabtay kulanka. Sharci dejinta ayaa sameysay isla sanadkii hore iyaga oo amarey in hay'ad kasta oo sharci fulineed oo adeegsata kaamirooyinka jirka ay ka dhigaan sawirrada si isku mid ah oo ay shacabka u heli karaan.
Sharci-dajiyayaashu hadda waxay ka fiirsanayaan sharci mamnuucaya adeegsiga tikniyoolajiyadda wajiga iyo sawirrada kamaradaha jirka.
Ilaalinta Sharciga Qaanuunka iyo Qarsoodiga Aasiya ahaa kii ugu dambeeyey: December 12th, 2019 by admin
2838 Wadarta Views 7 Views Maanta
Sidee Saraakiisha Booliisku Jidhku Usha Kaameradooda Ugu Saameeyaan Sirta Aasiya
Kordhinta walaacyada amniga iyo sirta…
Sidee ayay kamaradaha xiran-jirka u xirtaan xoojinta sharci fulinta?
Faa'iidooyinka Macquulka ah ee Camera Worn Camera ee Dhaqangelinta Sharciga
Dhiirrigelinta Aqoonsiga Wajiga ee Dhaqangelinta Sharciga…
Miisaan yar oo WIFI ah oo Dhaqan Geliyaya Kaamirada Worn,…